Naseho ny : 14 jolay 2020
Feno herin-taona mahery i Rivo zanak'i Dera sy i Vola. Tapaka ny hevitra fa hoatao hasoavana iny ririnina iny i Rivo. Tsy dia naharototra an'i Dera loatra izany, ny antony dia noho izy tsy dia marisika firy amin'ny fitsaboana aretina sy ny manodidina azy ; tsy tahaka an'i Vola sy ireo ray aman-dreniny izay efa niresadresaka mihitsy hatramin'ny fomba hanatontosana izany.
Diso fotoana ora roa tamin'ny nifanomezana ny fahatongavan'ireo hohamasinina fanambadiana tany am-piangonana. Nahatsikaiky an'i Dera sy i Vola ny nahafantaran'izy ireo fa ny zanak'izy roa mpanambady ihany no nitarika ny voaly nisaloran-dravehivavy. Ny fahatsoran'ny fitafian'ny mpampakatra sy ny ampakarina dia vokatry ny tsy fahalalana sy ny tsy fandrosoana fa tsy hoe fahihirana na fahantrana.
Naseho ny : 10 jolay 2020
Nanatrika lanonam-panambadiana tany ambanivohitra iray i Dera sy i Vola. Fahatsoram-po, fahatsoram-piseho : anisan'ny manamarika ny toetran'ny olona any ambanivohitra no nanafy ireo olona niserasera tamin'i Dera sy Vola iny andro iny, saingy manana izay antony maha samy hafa azy amin'ny fomban'ny olona any Ambatomainty tanànan-dry Dera.
Pejy 7 amin'ny 66